सिंगलमै खुसी छु : मिलन नेवार, गायिका « Drishti News
चर्चित पाश्र्वगायिका मिलन अमात्य अब मिलन नेवारका रुपमा चिनिन चाहन्छिन् । केही समयअघि पति मेन्सन अमात्यसँग डिभोर्स गरेपछि ‘सिंगल’ रमाउँदै आएकी उनी आफ्नो नामबाट ‘अमात्य’ ‘डिलिट’ गर्न चाहन्छिन् । ‘अब म आफ्नै नाम र पहिचानले चिनिन चाहन्छु’ भारतको आसममा जन्मिएकी मिलन भन्छिन्, ‘मिलन आमात्यभन्दा पहिले नेवारकै रुपमा चिनिएकी हुँ ।’ तर, उनलाई अमात्य डिलिट त्यति सजिलो छैन । किनकि, नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा उनी मिलन अमात्यकै रुपमा चर्चित छिन् । एक दर्जनभन्दा बढी भाषामा गीत गाइसेकेकी यी चर्चित गायिका भन्छिन्, ‘म स्वतन्त्रता चाहन्छु । त्यसैले फेरि घरजम गर्नेबारे सोचेकी नै छैन ।’ हाल ‘मिलन यात्रा’ एल्बमको तयारी गरिरहेकी यिनै मिलन नेवारसँग एमपी सुब्बाको जम्काभेट :
पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहन्छ ?
गीत रेकर्डिङ र स्टेज कार्यक्रमहरुमै व्यस्त छु । साथै, म्युजिकको अध्ययनलाई पूरा गर्दैछ । अहिले त्यसैमा बढी ब्यस्त छु ।
मोडलिङ पनि आफै गर्नुहुन्छ है ?
आफ्नो गीतको भिडियोमा मात्र हो । अरुको भिडियोमा गरेकी छैन ।
यति व्यस्त हुनुहुन्छ । तर हिजोआज मिडियामा त्यति देखिनुहुन्न नि ?
हो, मैले जोसुकैलाई अन्तर्वाता दिएकी छैन किनकि मिलन अमात्यलाई ओझेलमै पार्न खोज्दैछु । म अब मिलन नेवारका रुपमा चिनिन चाहन्छु । अमात्य हुनुभन्दा अगाडि मिलन नेवारकै रुपमा चनिन्थे ।
तर, नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा मिलन अमात्यकै रुपमा चर्चित हुनुहुन्छ नि ?
हो, यो मेरो लागि रमाइलो र चुनौती पनि हो । तैपनि मिलन अमात्य नै मिलन नेवार हो भन्ने बिस्तारै बुझाउने छु ।
मिलन अमात्यकै रुपमा चिनिँदा केही बाधा छ र ?
त्यस्तो बाधा छैन । तर, कतिपय पतिसँग डिभोर्स गरेर पनि पतिकै थर राख्दै आएको सुनेकी र देखेकी छु । तर, मेरो आफ्नै पहिचान छ । अर्को कुरा उहाँ (मेन्सन)ले विवाह गरेर आफ्नो जीवन अगाडि बढाइसक्नु भएको छ । यो अवस्थामा मैले किन उहाँको थर राख्नु ? साथै थर र जातलाई भन्दा काम र योगदानलाई मुल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
अहिले ‘सिंगल’ हुनुहुन्छ । ‘डलब लाइफ’ र ‘सिंगल लाइफ’मा के फरक पाउनुभयो ?
सांगीतिक करिअर सुरु गर्दा पनि सिंगल नै थिएँ । बिचमा डबल भएकी हुँ । र, अहिले फेरि सिंगल छु । विवाह गरेपछि कतिपय कुरा चाहेर पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ किनकि, घरमा जति नै स्वतन्त्र भए पनि एक बुहारी थिएँ । त्यो मैले आफैले पनि मनन गर्नु पर्दथ्यो । अहिले आफ्नै आमा–बुबासँग बसेकी छु । स्वतन्त्र काम गर्न पाएकी छु । र, खुसी पनि छु ।
सधैं सिंगल बसेर त हुन्न होला । अर्को विवाहको बारेमा के सोच्दै हुनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म त्यस्तो केही सोचेकी छैन । संगीत र मेरो पढाइलाई पूरा गर्नेक्रममा छु । विवाहपछि पूरा गर्न नसकेको मेरो संगीतको अध्ययनलाई यो वर्ष पूरा गर्दैछु । ललित क्याम्पसबाट संगीतमा ब्याचुलर क्लियर गर्दैछु ।
विवाह गर्नुपर्छ भनेर आमा–बाबुले कर गर्नुहुन्न ?
अहँ गर्नु हुन्न । कतिपय कुरामा म आफैँ निर्णय गर्छु । त्यसैले पनि उहाँहरुले केही भन्नु हुन्न ।
जति मिठो स्वर, उस्तै सुन्दर हुनुहुन्छ । प्रेम र विवाहका लागि प्रस्ताव त धेरै आउँछ होला है ?
मन पराउनेहरु त भइहाल्छ नि । प्रेम र विवाहकै लागि भन्दा पनि स्वर मनप¥यो भन्नेहरु बढी आउँछन् ।
अन्त्यमा, ‘मिलन यात्रा’ श्रोता÷दर्शकको हातमा कहिले आउँछ ?
आउँदो सन् २०१९ को जनवरी २५ को दिन आउँछ । त्यो दिन मेरो जन्मदिन हो । त्यही विशेष दिनको अवसर पारेर ‘मिलन यात्रा’ सार्वजनिक गर्दैछु ।